Halatra herinaratra : « Dosie » 80 no efa niakatra Fitsarana -
AccueilSongandinaHalatra herinaratra : « Dosie » 80 no efa niakatra Fitsarana
Halatra herinaratra : « Dosie » 80 no efa niakatra Fitsarana
Tsy takona hafenina. Mitohy hatrany ny fanadihadiana sy fidinana ifotony ataon’ny eo anivon’ny orinasa Jirama, mahakasika ny halatra jiro manerana ny Nosy. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ity orinasa mpamokatra herinaratra ity, efa hatrany amin’ny 80 any ny « dosie » mahakasika ny halatra jiro sy herinaratra nentina teny anivon’ny Fitsarana. Voalaza mantsy fa ho an’ny taona 2017 – 2018, mpanjifa 47 000 no nanaovana fanadihadiana sy fandalinana, mahatratra 5 000 kosa indray no tsy ara-dalàna amin’izany.
Araka izany, mitentina hatrany amin’ny 6 miliara Ar kosa ny fatiantoky ny orinasa amin’ireo mpanjifa tsotra, raha 3 miliara Ar kosa ny an’ireo mpanjifa goavana. Raha ny fanazavana hatrany, niteraka fatiantoka 30% amin’ny famokarana herinaratra ho an’ny orinasa Jirama izany rehetra izany, amin’izao fotoana izao. Ankehitriny mantsy, olona miisa telo no efa naiditra am-ponja, mizaka sazy herintaona an-tranomaizina raha fito kosa sazy mihantona. Ankoatra izay, nambaran’ity tompon’andraikitra iray ity ihany, fa misy amin’ireo orinasa tsy miankina no miseho azy tsy ho azon’ny aloka, ka manaotao foana amin’ny halatra jiro.
Mbola mitohy, araka izany, ny fikarohana sy fanadihadiana ataon’ny Jirama amin’ny halatra jiro sy herinaratra, fa tsy mijanona hatreo akory.
Tafiditra ao anatin’ny programan’asan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana ny fanomezana lanja ny Faritra 22 mba ho fitsinjaram-pahefana tena izy amin’izay no misy eto amintsika fa tsy sarintsariny tahaka ny taloha. Hisy rafitra telo araka ...Tohiny